Fikarohana momba ny firaisana Trangam-panjakan'olo-tokana nataon'i Michael Byrne ao amin'ny HMS Bounty | John Lennon - Fikarohana momba ny vatana teraka
Hita taratra amin'ny: Torolalana ho an'ny Fanahy na Fanahy Ahtun Re ao amin'ny sehatry ny Reincarnation Ryerson-Semkiw
Nolazaina tamiko fa i John Lennon dia manana fifandraisana akaiky amin'ny sambo sy ny ain'ireo izay nandeha sambo. Rehefa nanontany an'i Ahtun Re aho hoe avy aiza io fiaraha-miory io, dia nilaza tamiko izy fa "fiddler" tao amin'ny sambo i Lennon fiantranareo. Nanontany aho raha toa i Lennon no iray amin'ireo mpiray tsikombakomba na hoe mpomba an'i Loyno. Ahtun Re nilaza tamiko fa Lennon dia iray amin'ireo mpomba ny mpifaninana.
Tamin'ny voalohany dia hitako fa sarotra ny mino, toa ny fiantranareo dia nanana ekipa kely ary ny famerenana voalohany ny vaovao momba ny fiantranareo tsy niresaka firy momba ny mozika.
Ny fiainana taloha nataon'i John Lennon tao amin'ny HMS Bounty
Ny fanadihadiana hafa dia nanambara fa ny mpibaiko iray dia voatendry ho an'ny Bounty izay anarana Michael Byrne. Niara-niasa tamin'ireo mpivavaka taminy i Bryne ary niverina tany Angletera. Nandritra ny fivoriana nanaraka tamin'i Kevin Ryerson, Ahtun Re dia nanamafy fa i John Lennon dia Byrne tamin'ny vanim-potoana vao niova.
Ny fahosana amin'ny fiainana taloha dia mitarika ho amin'ny tontolon'ny mozika
Byrne dia nofaritana ho jamba. Lennon sy Branwell Bronte, ny fahatongavan'i John Lennon lasa nofo iray hafa koa dia tsy nahita lavitra. Rehefa nanontany an'i Ahtun Re aho momba ny antony mahatonga ny nofo nofo an'i Lennon hanana toetra mampiavaka ny fahitana, dia nanazava izy fa i Lennon, tany Ejipta fahiny, dia niaina jamba iray manontolo. Tany Egypt, hoy hatrany i Ahtun Re, nisy olona jamba nampiofanina ho mpitendry zavamaneno. Nanomboka tamin'izay, Lennon dia maniry ny hanana fiainana mandrakotra rakotra feo.
Ian Stevenson, MD, dia nahatsikaritra fa ireo olona maty noho ny ratram-panafihana, toy ny avy amin'ny tifitra na fikorotanana, Matetika ny mararin'ny fiankohofana dia misy marika na marika ao amin'ireo toerana eo amin'ny vatana. Na dia tsy fantatra mazava aza io trangan-javatra io dia hita fa ny fahavoazana eo amin'ny taova dia mety hisy vokany mivaingana amin'ny hoavy.
Fitoviana ara-batana amin'ny fotoana iray amin'ny hafa: Tsy azo dinihina izany, satria tsy misy ny sarin'i Michael Byrne.
Innate Past Life Talent: Byrne sy Lennon dia mpihira matihanina.